Yakatumirwa ne Tranquillus | Sep 8, 2018 | Ukama hwehukama
Kukurukurirana pakati pevanhu ndeimwe yezvinhu zvinoita kuti kambani iite basa. Kana yakatorwa zvakanyanyisa, inzvimbo yakakosha yevashandi vose pamwe chete nesangano pachayo. Ichi ndicho chikonzero zvakakosha kuita shingai panyaya iyi. Mubvunzo ndowokuti ungavandudza sei kuitira kuti ubatsirwe kubva kune zvaunobatsira. Izvi ndizvo zvatichaona pasi apa.
Pfungwa dzenhema pamusoro pekukurukurirana nevamwe
Iwe uri mumwe wevanhu ivavo vasingazive maitiro ekuvandudza hukama hwavo nevamwe, kunyanya kubasa kwako? Saka ziva kuti dzimwe tsika dzakaipa dzinogona kuchinja kukurukurirana kuti iwe unayo nevamwe vako. Heano mamwe mazano aunofanira kusiya kuti uvandudze ukama hwako, zvisinei kuti ndiani, wauri kuchinjana naye.
Tinogara tichinzwisisa zvandiri kutaura
Usatenda kuti zvinhu zvose zvaunotaura zvinogara zvinonzwisiswa newe interlocutor. Uyewo, nguva dzose nyatsoteerera uye zvibvunze kana munhu wauri kutaura naye awana zvose zvawakamuudza. Kazhinji, kana iwe unonzwisiswa zvakanaka, wako interlocutor angashanduka kuchinja shoko rako mune imwe nzira, cherechedza kusanzwisisana.
Taura zvakawanda kuti unzwisise zviri nani
Kana pfungwa dzako kana nharo dzako zvikaramba zvisina kunzwisiswa mushure mekutsanangurwa kwako, usaomerere nenzira iyi uye usasimudze matauriro kuti iwe unzwisisike kana. Chokwadi, dzimwe nzira dzakareruka kana dzakaenzanisirwa dzinokutendera kuti upe pfungwa dzako. Saizvozvo, kushandiswa kwemamwe maturusi kunogona kukubatsira zvakanyanya kuita izvi.
Kutaura kunogadzirisa matambudziko ose
Kufunga kuti kunyatsogadzirisa chinetso kunogara kuchigadzirisa iyo zvakare kukanganisa. Zvechokwadi, zvimwe zviitiko zvinogadzirisa pachavo kunze kwekuti iwe uchataurirana nemamwe nhengo dzeboka rako. Saka ngwarira nguva dzose uye uzive kuti kugara wakanyarara kune njere mune dzimwe mamiriro ezvinhu. Iwe haufaniri kuva iwe unobvisa nyaya dzinoshungurudza pane imwe mukana.
VERENGA Nzira yekugadzirisa sei shamwari yako ane mafungire akaipa?
Kukurukurirana zvinonzwisisika ndekwechokwadi
Hapana mushandi anogona kutaurirana kutaura asina kudzidza zvidzidzo uye akadzidziswa. Kutevera muenzaniso wekutsvaga, kuziva kuti kutaura kunoshanda sei, uye vamwe vanogona kuzviita nokukurumidza, vamwe havagone. Uyewo kana vamwe vanhu vane simba rechisikirwo, vamwe vanofanira kudzidzisa vasati vanyengetedza. Nokutevera dzimwe mazano anobatsira panyaya yacho, unogona kuvandudza munharaunda iyi.
Kuti uzive zvakanaka
Kunyangwe iwe uchigara uchitsvaga kuchengetedza hukama hunowirirana nevamwe mune rako basa, mune zvimwe zviitiko zvakakosha kuti ufunge nezve zvaunofarira pamberi pevamwe. Izvo zvinopesana zvinogona kukanganisa kukanganisa kwako, chikonzero chakanaka chekuona zvauri kunyatsoda. Zvinoenderana nemashoko ako uye maitiro ako, iwe unoratidza muchokwadi:
Mubatanidzwa mumwe nomumwe ane unhu hwake, ndiko kureva unhu hunomusiyanisa kubva kune vamwe uye hunoita unhu hwake. Nokufungisisa unhu hwako, uchakwanisa kuziva mamiriro ezvinhu kana mikana inofadza kukura kwako uye iyo inogona kukuvadza nzvimbo yako yebasa. Iwe uchakwanisa kuramba wakatendeka iwe pachako.
Aya maitiro anogona kuva ehutano, zvechitendero, tsika kana zvimwe uye pane avo iwe unowedzera uye unozvigadzirira iwe muupenyu hwezuva nezuva. Kana kuvimbika kwaikosha iwe uchikoshesa, iwe unogona kuchiremekedza nguva dzose nekukurudzira vamwe vako kuti vafunge maonero aunoona zvinhu mukubata kwavo newe.
Somunhu, iwe une tsika yako pachako. Vamwe vangave vachifarira ukama hwakanaka, hwakachengetedzwa zvakanaka, pamwe nevamwe vako, asi vamwe, kwete. Edza kuziva avo vane chinetso chisina kunaka uye vanovandudza.
Ziva izvo zvaunoda kuita basa zvakanaka. Ita zvakafanana kune mamiriro aunoda kuita. Kutaura zvazviri, vashandi vakawanda vaizobudirira kana vakagoverwa nemichina yakakodzera yekuita basa ravo. Kungofanana nevakawanda vanotarisira mhinduro yakanaka kana kuti kugadzirisa kwakakosha kugadzirisa kubudirira kwavo.Usava mumwe wevaya vanobvumirana kushanda mune chero mamiriro ezvinhu uye nenzira ipi zvayo.
Ziva kuti ungaziva sei manzwiro ako usati wataura kune waunoshanda naye kana panguva yekutengesana kwako. Zvechokwadi, unganzwa uchifara, kusuruvara, kutsamwa kana kutya. Nokufungisisa nyika iyo yaunowana iwe, iwe unenge uine chiitiko chekutora chisarudzo kana kudzorera hurukuro yako kuti unzwisise zviri nani mamiriro acho ezvinhu.
Chii chaunofanira kutaura? Chii chaunofanira kuita?
Iva zvakananga, kureva kuti, zivisa vashandi vako nezvemaonero ako panyaya kana mamiriro ezvinhu uku uchichengeta yakatarisa pauri nepfungwa dzako. Kuti uite izvi, pinda mutsika yekutaura mumunhu wekutanga "I." Semuenzaniso, “ndinoshamiswa nekunonoka kwako kusangana mangwanani ano. "Uye dzivisa" munhu wese anofunga kuti kunonoka mumusangano kunofanirwa kurangwa. "
Taura chokwadi. Dzivisa kuita kutonga pamusoro pehunhu hwevamwe vako, ingo taura chokwadi. Iti semuenzaniso: "ruzivo iwe rwawakagovana haruna kukwana" pane kuti "iwe unoda kuverengera iro data kuti uve nesimba rakawanda pamusoro pevamwe vako. "
Zviratidzo maererano nemazwi ako: Uyewo sarudza kuramba wakanyarara panzvimbo yekurumbidza mumwe waunoshanda naye mubasa rausingadi. Zvechokwadi, kusimbisa hukama hwakanaka hwekuvimba, zvakakosha kuti zviito zvako zvinoenderana nemashoko ako.
Bvunza vamwe mhinduro
Vamwe vanhu vane unyanzvi hwekukurukurirana hwevanhu vasina hanya apo vamwe vanoda kukurudzirwa uye kudzidziswa kune mhando dzemibvunzo. Kuti urege kutsausa unyanzvi hwako hwemazuva ano, bvunza vateereri vako zvavanofunga nezvekuti iwe unoshanda sei navo zuva nezuva.
Mutemo wegoridhe wekukurukurirana kwakanaka
Saka tingaite sei kuti tizvinzwe neanopindirana nesu kana isu pachedu tine tsika yakaipa yekusaterera izvo zvaanotitsanangurira? Kuteerera kumashoko emunhu mucherechedzo wekuremekedza mukutaurirana kwevanhu. Saka dzivisa kuzvitsausa kana mumwe achitaura newe. Wobva wadzokorora zvaakakuudza kuti umuratidze kuti iwe unonzwisisa zvese.
Kunyange zvazvo mazano aya anopiwa kuti ashandise panzvimbo yebasa, achabatsira kwose kwose.
Kuvandudza Kutaurirana Kwaunenge Uchinyanya Kuita Pabasa Svondo 26th, 2018Tranquillus
pashureThe G Suite Training Center
zvinoteveraKunzwisisa mupfungwa kubasa
Kutsoropodza kunogadzirisa kuitora, kuigamuchira.
Sei usingagumbuke pabasa?
Nzira yekuteerera zvakadini?